Fariin Furan oo ku socota Wada-hawlgalayaasha Deeqaha bixiya
Maaddaama aan nahay reer Minnesota ee cusub, qoyskeyga iyo aniga waxaan degeynaa xilli aan degganeyn. Xitaa anigoo guga gunta ah iyo wararka rajada badan leh ee talaalada badan, waxaan si qoto dheer uga warqabaa dhibaatada bulshadayada haysata.
Waxaan ka bilaabay McKnight bartamaha masiibada, kuna saabsan dacwadda dilka George Floyd, lix toddobaad ka hor dilkii bilaa macnaha ahaa ee Daunte Wright iyo 13-jirka Adam Toledo, iyo dhexda toogasho wadareed ay sheegteen nolosha dad aad u tiro badan guud ahaan qarankeena. Waxaan iskudareyneynaa oo aan dib uugusoomeynaynaa dhibaatadii kadhacday sanadkii lasoo dhaafay shaqsi ahaan iyo wadar ahaanba.
Soogalooti ahaan, waxaan ogahay inaan si dhab ah u fahmi karin khibradaada ama cadaadiska joogtada ah ee ciyaarta. Waxa aan ogahay waa sida aan xilligan ula tacaalno arrimaha. Aniga oo ah qof ku noolaa kuna hogaaminaayey magaalada Detroit, waxaan goobjoog u ahaa oo aan ka shaqeeyey sidii aan uga gudbi lahaa maalmihii madoobaa ee magaaladaas. Waxaan bartay in xilliyada adag, aan awoodno oo aan dhisno xusuusta muruqyada si aan wax u wada qabsanno oo aan si fiican u qabanno. Daqiiqadahaani waxay na siinayaan adkeysi aan ku qaban karno xitaa waxyaabo adag mustaqbalka.
Khibradihii aan soo maray ee dhibaatooyinka, waxaan kaloo ka bartay in ummaddi markay timaaddo oo ay ku degto meel ay sheekadeeda uga sheekayso, in dhif ah ay saxdo. Xilliyadan, waa inaan u wada istaagnaa beel ahaan, si cad oo joogto ah uga helnaa sheekadeena, isla markaana ujeeddo ka leenahay waxa aan dooneyno inaan abuurno.
"Waxaan ku jirnaa xaalad fiican oo aan ku abuuri karno wax cusub wadajirka, annaga oo soo qabaneyna fursadaha sida ay u egyihiin gobol iyo caddaalad." —TONYA ALLEN, MADAXWEYNE
Waan garwaaqsanahay oo aan la dhacsanahay xoogga iyo adkaysiga cajiibka ah ee aad muujisay sanadkii la soo dhaafay — iyo inaad sii wici doonto wicitaanka, gaar ahaan xilliyada dhacdooyinka la mid ah kuwii toddobaadyadii la soo dhaafay iyo xilliyadan adag. Waxaan aragnay shaqada aad ka qabanayso dhulka iyo bulshadaada, waana ku faraxsanahay inaan iskaashi la yeelano sidii aan ugu shaqeyn lahayn mustaqbal cadaalad, hal abuur leh, iyo dad badan.
Aynu ku dhiirrigelinno xaqiiqda ah inaan ku jirno xaalad qumman oo aan ku abuuri karno wax cusub wada jir, qabashada fursadaha waxa u eg gobol iyo caddaalad iyo gobol u eg. Si loo sameeyo, waa inaan ku sii jirnaa xilligan xaadirka ah si cad mustaqbalka. Waxaan u baahanahay inaan daryeesho nafteena iyo bulshadeena hadana indhaheena si xoogan ha u saaraan dhisida magaalooyin mataano siman iyo Minnesota. Waa inaan sharfnaa xilligan iyo nolosha Mudane Floyd iyo Mr. Wright innagoo xanuunkeenna u beddelayna ujeedo.
Ninkayga, Louis, wuxuu had iyo jeer dhahaa, "Superheroes ma daali karaan, maxaa yeelay haddii ay sameeyaan, maxay yihiin dadka caadiga ah ee la sameeyo?" Dareenkaan, waxaan ogahay inaan u adkeysan doonno wax badan oo naga dhigi doona daal, jahwareer, culeys, iyo farxad. Haddana adiga - qaabkaaga caafimaad iyo hoggaankaaga ugu sarreeya ayaa looga baahan yahay beesheena, hadda in ka badan sidii hore. Waxaan ubaahanahay awooddeena superheroes taam.
Waxaan u imid Minnesota maxaa yeelay waxaan ku arkay halkan fursad aan caadi aheyn oo aan ku garab istaagi karo hogaamiyaasha adiga oo kale ah. Waxaa la iigu yeeray inaan gacan ka geysto sidii loo dhisi lahaa mustaqbal waara, oo mustaqbal u leh Minnesota iyo wixii ka dambeeya, si loo hubiyo in qof walbaa uu horumari karo. Haddii gobolkani horumar ka samayn karo arrimahan - xilligan oo adduunka oo dhami daawanayo - waxaan noqon karnaa calanka u sidha ummadda inteeda kale.
Mustaqbalkeennu wuxuu ku tiirsan yahay awooddaada inaad adkaysi u yeelato xilligan. Waad ku mahadsan tihiin dhamaantiin waxaad u qabataan Minnesota, waxaanan rajaynayaa wada shaqeenna.